Rina Randriamasinoro: Niaina ny zava-misy, vahaolana avy hatrany
vendredi, 18 octobre 2019 15:00
Nanao fanatanjahan-tena vao maraina tety amin’ny Boriborintany faha-4 Antananarivo Renivohitra, androany, i Rina Randriamasinoro niaraka tamin’ny filoha teo aloha sady filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara Marc Ravalomanana.
Nandray Taxi-Be niazo an’Anosibe izy ireo taorian’izay. Niaina sy nijery ny zava-misy tety an-toerana. Nitafa sy nidinika nivantana tamin'ny mpivarotra amoron-dalana. Nifampiresaka tamin'ny mpandeha Taxi-be momba ny fitaterana sy ny fitohanana.
Niara-nanadio tamin’ireo mpamafa lalana an’ny Kaominina Antananarivo renivohitra ihany koa.
Kandida amin’ny fifidianana Ben’ny tanàna eto Antananarivo Renivohitra hatao amin’ny 27 novambra 2019 i Rina Randriamasinoro ; narotsaky ny antoko Tiako i Madagasikara, mitondra ny laharana faharoa (2) amin'ny bileta tokana.